စပိန်နှင့် ပွဲကို လက်ဝှေ့ပွဲ တစ်ပွဲနှင့် ရုရှားတိုက်စစ်မှူး ဒီဇူဘာ ခိုင်းနှိုင်း၊ ဦးစားပေ?? - Yangon Media Group
စပိန်နှင့် ပွဲကို လက်ဝှေ့ပွဲ တစ်ပွဲနှင့် ရုရှားတိုက်စစ်မှူး ဒီဇူဘာ ခိုင်းနှိုင်း၊ ဦးစားပေ??
ရုရှားတိုက်စစ်မှူးဒီဇူဘာက အုပ်စုအဆင့်ကိုကျော်လွန်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက် ၁၆ သင်းအဆင့်တွင် ထိပ်သီးအသင်းတစ်သင်းဖြစ်သော စပိန်နှင့်ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ရာ ယင်းပွဲမှာ လက်ဝှေ့ပွဲစဉ်တစ်ခုနှင့်တူညီကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ ရုရှားသည် အဖွင့်နှစ်ပွဲတွင် ဆော်ဒီနှင့်မော်ရိုကိုအသင်းများကို အနိုင်ရခဲ့သော်လည်း နောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွင် ဥရုဂွေးကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့သည့်အတွက် ဒုတိယနေရာသာ ရခဲ့သဖြင့် ရှုံးထွက်အဆင့်တွင် စပိန်နှင့်ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဒီဇူဘာက ”၃၂ နှစ်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ရှုံးထွက်အဆင့်ကိုတက် ရောက်ခွင့်ရခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ဖို့ ဖြစ်လာပါပြီ။ လာမယ့်စပိန်နဲ့ပွဲက လက်ဝှေ့ပွဲတစ်ပွဲလိုဖြစ်နေပြီး အတွေ့အကြုံရှိဖိုက်တာတစ်ဦးနဲ့ ရဲဝံ့တဲ့လူငယ်လေးတစ်ဦး ထိုးသတ်ကြမယ့်ပွဲလိုပါပဲ။ ကိုယ့်အလိုအ တိုင်းဖြစ်တဲ့နေ့ဆိုရင် ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကိုမဆို အနိုင်ရနိုင်စွမ်းရှိလို့ ဘယ်သူက ပိုကောင်းသလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ဖို့ပဲရှိပါတယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ဒီဇူဘာက ကစားသမားတစ်ဦးအနေဖြင့် မိမိ၏ခြေစွမ်းမည်မျှ ကောင်းသည်ကို အကောင်းဆုံးဟူသောကစားသမားများနှင့် အားပြိုင်ခြင်းမှသာ သိနိုင်သည့်အတွက် ပီကေး၊ ရာမို့စ်တို့နှင့် အားပြိုင်ရမည့်အနေအထားအပေါ် စိတ် လှုပ်ရှားမိကြောင်း ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် စပိန်အသင်းနည်းပြဟီယာရိုက ဝေဖန်မှုများနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ ရပြီးနောက် ဖိအားများရှိနေသော်လည်း ဦးစားပေးဂိုးသမားအဖြစ် ဒီဂီယာကိုသာ ဆက်လက်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဒီဂီယာသည် ပေါ်တူဂီနှင့်ပွဲတွင် ၎င်း၏အမှားမှ ဂိုးပေးခဲ့ရသည့်အပြင် မော်ရိုကိုနှင့်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ရောက်မှ ဂိုးကာကွယ်မှုတစ်ကြိမ်စတင်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ရာ ဒီဂီယာ၏နေရာတွင် အခြားကစားသမားများကို နေရာပေးသင့်ကြောင်း သုံးသပ်မှုများရှိလာခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် စပိန်နည်းပြဟီယာရိုက အုပ်စုတွင်းသုံးပွဲတွင် ငါးဂိုးအထိပေးခဲ့ရသော်လည်း ဒီဂီယာကိုသာ ဦးစားပေးဂိုးသမားအ ဖြစ်ဆက်လက်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပြီး ပြိုင်ဘက်ရုရှားမှာ အမြင့်ဘောများဖြင့် မိမိတို့ကိုအန္တရာယ်ပေးလာနိုင်သည်ကိုသိရှိထားကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင် စပိန်ကွင်းလယ်လူ အဲလ်ကန်တာရာက ဒီဂီယာမှာ အကောင်းဆုံးဂိုးသမားဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပြီး ¤င်းအပေါ်အသင်းဖော်များက အပြည့်အဝယုံကြည်ထားကြကြောင်း ထောက်ခံပြောကြားခဲ့သည်။